Please read this post! | Thaing Wizard
Posted on February 25, 2013 by Aung Thu Htet
Thaing Wizard website ကို 12 Feb မှာ စတင် ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် public ကို ချမပြဖြစ်သေးပါဘူး။ မနေ့က (24 Feb) မှာတော့ facebook ပေါ်မှာ စတင်ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အခြား social engineering website တွေမှာ ပါ ကြေညာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တစ်ကယ်ဆိုရင်တော့ website က ပြီြး့ပည့်စုံခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ လိုအပ်ချက်တွေတော့ ရှိနေဦးမှာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ သိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ် ၄ အုပ်တင်ထားပါတယ်။ အခြား ကာယဗလနဲ့ ယောဂဆိုင်ရာ မြန်မာလိုစာအုပ်တွေရော အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တွေပါ တင်ထားပါတယ်။
အခြားမတင်ရသေးပေမယ့် list ထဲမှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ သိုင်းစာအုပ်တွေကိုလည်း တစ်ပတ်ကိုတစ်အုပ် သို့မဟုတ် နှစ်အုပ်လောက်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး တင်ပေးသွားမှာပါ။ scan ဖတ်ရမှာရယ် တစ်ချို့ scan ဖတ်လို့ အဆင်မပြေတာတွေကျ ကိုယ်တိုင် ပြန်စာစီပြီး လုပ်ပေးမှာမို့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သိုင်းစာအုပ်အသစ် တင်ဖြစ်တိုင်း သိချင်ရင်တော့ blog မူရင်းစာမျက်နှာ (Home page) ညာဘက်က box လေးမှာ email ထည့်ပြီး Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
This entry was posted in Uncategorized by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.